အဆိုပါထိပ်တန်းဘာတွေလဲ 8 အီတလီမှာပီဇာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > အဆိုပါထိပ်တန်းဘာတွေလဲ 8 အီတလီမှာပီဇာ
ဘယ်အရပ်ဌာနပိုကောင်းကတီထွင်သောတိုင်းပြည်ထက်ပီဇာကိုခံစားဖို့, မှန်သော? အီတလီချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒီအရသာရေစာ-လှည့်-မုန့်ညက်ကိုချစ်! အီတလီမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါပီဇာများမှာ အနုပညာစင်ကြယ်သောပုံစံသို့လှည့်, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်များမှာ ယူနက်စကို-အတည်ပြု!
အီတလီနိုင်ငံန်းကျင်ရုန်းမင်း, သငျသညျ 18 ရာစုအတွင်းဖွင့်လှစ်ပီဇာဆိုင်ကိုဒါပေမယ့်လည်းလူသစ်တွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, မုန့်ဖုတ်ဖို့လုံးဝလတ်ဆတ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ. အခြေစိုက်စခန်းရွေးချယ်စရာအမျိုးပေါင်းရာနဲ့ချီရှိပါတယ်, toppings, အရွယ်အစား, နှင့်အရသာ. အများအားဖြင့်, သင်ဤရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပီဇာရှိခြင်းကိုကျော်သွားလို့မရဘူး လှပသောမြေထဲပင်လယ် ပြည်… အဆင်ပြေ? ကောင်းသော. သင်တစ်ဦးပီဇာပန်ကာမဟုတ်ရင်တောင်, အီတလီစားဖိုမှူးသင်သည်သင်၏စိတ်ပြောင်းရလိမ့်မယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းသငျသညျရောမမြို့ထိပ်-ထစ်စားသောက်ဆိုင်အားငါပေးမည်, မီလန်, Florence, Naples, နှင့် Verona. ဤတွင်ထိပ်များမှာ 8 အီတလီမှာပီဇာ.
မှတ်စု: ရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့ လူအပေါင်းတို့သည်စူပါအသုံးဝင်သောခရီးသွား apps များ download လုပ်ပါ သင်သည်သင်၏ခရီးမစတင်မီ.
Trastevere အတွက် da Vittorio, ရောမမြို့: တစ်ဦး Adventures Twisted နှင့်အတူပီဇာ
အီတလီမှာပီဇာ၏ဤရွေးမှာပါ, သင်နမူနာကောအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ် "Tre Colori ပီဇာ။ " သုံးကွဲပြားခြားနားသောစပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအနီရောင်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဖြူနှင့်အစိမ်းပီဇာ, ရုံနဲ့တူ အီတလီ အလံ. အဆိုပါ jalapeno ငရုတ်ကောင်းပါစေခြင်းငှါမကြိုးစားပါ, စပ်အဘိဓါန် Sicilian- ဝက်အူချောင်း, နှင့် tangy အဖြူရောင်ဒိန်ခဲ သင်၏နှုတ်ကိုမီးရှို့. သင်တို့အထဲ၌တပြင်လုံးကိုပီဇာပြီးစီးပါလျှင် 10 မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တစ်ဦးဆုအနိုင်ရ. ဤနည်းဥပဒေအပြင်, သငျသညျအစထက်ပိုမိုမသောက်နိုင်ကြ 16 ရေအောင်စသို့မဟုတ် ဘီယာ. အဆိုပါဆုရှင်အခမဲ့သည်သူ၏မုန့်ညက်ရရှိသွားတဲ့, တစ်ဦးတီရှပ်နှင့်ကျော်ကြားမှု၏မြို့ရိုးပေါ်မှာ posted ဓာတ်ပုံ. နှင့်, သင်ကလုပ်မပေးကြပါလျှင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်? သင်အမြဲထပ်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်, လာသောအခါသင်တို့သည်ဤမျှဤအရပ်ဌာနကိုသတိရ ရောမမြို့မှခရီးသွား.
ပီဇာဆိုင်ကို Da Attilio, Naples: ပီဇာ၏စစ်မှန်သောမျိုး
အချို့သောအခြေခံနှင့်အတူအီတလီတွင်ပီဇာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း start ကြပါစို့. အတော်များများကအီတလီ ထည့်သွင်းစဉ်းစား Margherita ပီဇာ၏တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့မျိုး. အနည်းငယ်လတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်အိမ်လုပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်အံ့သြစရာပန်းကန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသင့်တယ်, ထင်ရှားစွာ. ထိုသို့ Da Attilio ရဲ့ Margherita မှကြွလာသောအခါ, သူတို့မှန်. အိမ်လုပ်မုန့်စိမ်း, လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်, သံလွင်ဆီ, လတ်ဆတ်တဲ့ mozzarella သင်လိုအပ်သမျှများမှာ. သင်သည်ဤဖတ်နေနေကြသည်အဖြစ်သင်၏နှုတ်ရေလောင်းလျှင်, da Attilio သင်တို့အဘို့ရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါသည်. စဉ်ကထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ နေပယ်လ်မြို့ကိုစူးစမ်း.
အရသာ, Verona: Doe ပြုလုပ်ခြင်း၏အနုပညာ
Sapore သင်ရုံတစျခုစားသောက်ဆိုင်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မုန့်စိမ်းရဲ့အကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နေရာဖြစ်ပါသည်. Renato Bosco, အီတလီနိုင်ငံရာအရပျထဲမှာပီဇာ၏ဤရွေး၏ကြိုးကိုင်သူ, အီတလီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးမုန့်ချမှတ်ခြင်း၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည် ကျွမ်းကျင်သူများက. သင်ဒီမှာပီဇာ၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များများများရှာတှေ့နိုငျကတည်းက, က degustation menu ကိုအဘို့အမေးရန်ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီဒါဟာအစကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ရန်အကြံပြုသည်. သက်သတ်လွတ် သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကိုက်ညီသောပီဇာတစ်ခုများစွာသောရှိပါတယ်ကတည်းကများသောအားဖြင့် Sapore ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုကိုချစ်.
မီလန် Verona မှရထား
ပီဇာဆိုင်ကိုဘရန်ဒီ, Naples: 18 ရာစုကတည်းကအီတလီအတွက်အကောင်းဆုံးပီဇာတွေထဲမှာ
ပီဇာဆိုင်ကိုဘရန်ဒီဟူသောဝေါဟာရကိုပီဇာ Margherita coining များအတွက်သတင်းများအရတာဝန်ရှိသည်. သူတို့ကဤဘွဲ့နာမကိုယူ အမည်တူ၏မိဖုရားကိုဂုဏ်ပြုတဲ့. ဒါပေါ့, တူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပီဇာမတိုင်မီတည်ရှိ, ဒါပေမဲ့ဒီစပြီးအဆိုပါပီဇာစကွဝဠာထဲမှာအထင်ကရလုပ်. ပီဇာဆိုင်ကိုဘရန်ဒီနောက်ကျောမှစတငျရ 1870 ဒါကြောင့်ပီဇာဆိုင်ကို di Pietro ၏နာမတော်အောက်တွင် operated သည့်အခါ. အဆိုပါအစဉ်အလာများနှင့်ဤအရပ်ဌာနကိုနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းအီတလီအကြားကလူကြိုက်များစေပြီနဲ့ ခရီးသွားဧည့်. လူအစုအဝေးနေဆဲဒီမှာမိဖုရား-အမည်ရှိမွေ့လျော်၏တစ်ဦးအချပ်များအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်စုဝေးစေပြီးလျှင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
Rimini Naples မှရထား
Siena Naples မှရထား
la Taverna Gourmet, မီလန်: တစ်ဦးကမော်ဒန် Gourmet ပီဇာ
တစ်ဦးက နည်းနည်းစျေးကြီး တစ်ဦးပီဇာနေရာ, သို့သော်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းနှင့်တည်နေရာကြီးမားတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအပြစ်လွတ်ကြပါ. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အဆိုပါပီဇာသိပ်အရသာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ပီဇာဆိုင်ကို box ကိုပြင်ပထင်သူအဘို့ဖြစ်၏. သာမန်ထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအသစ်နှင့်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်သငျသညျကိုစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်, သင်္ဘောသဖန်းသီးနဲ့ပီဇာနဲ့တူသို့မဟုတ်ပင်လယ်စာနှင့်အတူ. တစျဖနျ, တစ်ဦး degustation menu ကဒီမှာအကြီးအရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကောက်ဖို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ကတည်းက. ထို့အပြင်, အီတလီမှာအများဆုံးကတခြားပီဇာနဲ့မတူပဲ, ဒီတစ်ခုတွေဟာအစာကြေဖို့တကယ်လွယ်ကူသည်.
il Trapizzino, ရောမမြို့: Little ကအမျိုးမျိုးတစ်ခုခု
il Trapizzino ဆိုပီဇာကိုနှစ်သက်မှုအတွက်အမှန်တကယ်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. အီတလီနိုင်ငံအခြားပီဇာမှနှိုငျးယှဉျ, ဒီနေရာမှာပီဇာကိုပိုမိုတြိဂံအသားညှပ်ပေါင်တူ. အချို့ကသူတို့ကိုပီဇာကျပ်ကိုပဌနာ. ဤအကျပ်တြိဂံအတွင်းပိုင်းကိုသင်ပေါင်းကြက်သားနဲ့တူပါဝင်ပစ္စည်းများရှာတှေ့နိုငျ, ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အနီရောင်ရေဘဝဲ. မုန့်စိမ်းကိုအလွန်အလင်းဖြစ်၏, သငျသညျနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုအပိုင်းပိုင်းစားရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော. ဒါဟာအသေး, Testaccio ၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပျူငှါနွေးထွေးသောနေရာအရပ်အမြဲလူတို့နှင့်အတူထုပ်ပိုးနေသည်. ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းကြိုတင်ငွေအနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်ကြိုတင်စာရင်းလုပ်.
la Spezia ရောမမြို့မီးရထားမှ
ပီဇာလေး, မီလန်: သင်က Cue ပီဇာခုနှစ်တွင်အီတလီနိုင်ငံစားနိုင်သလားဘယ်မှာတစ်ဦးကနေရာ
ဤသည်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးလူသိများပီဇာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြောင့်မီလန်၌တည်ရှိ၏. ထို့ကြောင့်, သင်ပြင်ပတွင်စောင့်ဆိုင်းကလူတစ်ဦး line ကိုကြည့်ရှုပါလျှင်အံ့ဩခြင်းမပါဘူး ဆိုင်. တွေကိုပီဇာလေးတစ်ဦးကိုပုံမှန်အရာများမှာ. သူတို့သည်သင့်တစ်နေရာရာတခြားသွားချင်ကြဘူးကတည်းက, သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင်ပိုင်ရှင်တွေကိုသင်သေးငယ်တဲ့ပီဇာချပ်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအီတလီအဖြူတစ်ဖန်ရနိုင် ဝိုင် လွန်း. သူတို့ဟာသေးငယ်တဲ့ menu ကိုရှိ, သာနှင့်အတူ3ပီဇာအမျိုးအစားများ. ဟေး, သငျသညျစိတျပူစရာမလို – ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, သငျသညျမှာအားလုံးထွက်ပျောက်ဆုံးနေတူသောဒါကြောင့်သင်ခံစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး.
Symbiosis အော်ဂဲနစ်ပီဇာ, Florence: တစ်ဦးကကျန်းမာရေးအီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်ပီဇာအပေါ်ကိုယူ
အမှု၌သင်တို့ကိုအီတလီမှာတစ်ဦး gluten အခမဲ့-ပီဇာကိုရှာဖွေနေကြသည်, အော်ဂဲနစ်အတွက် Symbiosis ဖလောသငျသညျသတိရသငျ့နာမညျဖွစျသညျ. အတော်ကြာသက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံ, တိုင်းပီဇာအံ့သြဖွယ်အရသာ! အရာအားလုံးအော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းထားသည်, ဒီပီဇာနည်းနည်းအောင် အခြားသူများထက်ပိုမိုကျန်းမာ. မုန့်စိမ်းသည်အလွန်ထူ, အရာလူတိုင်းရဲ့အရသာနောက်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါပေမဲ့ – လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုလုံးကိုပီဇာကိုစားရန်သင့်အားစိန်ခေါ်သောကြွယ်ဝသောအဆာခစျြလိမျ့မညျ! သငျသညျကအားလုံးကိုမစားနိုင်လျှင်, ကျန်ရစ်မယ့်အဘယ်အရာကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်မနက်ဖြန်ထိုသို့ကယ်တင်. ဒါဟာနေဆဲအရသာမြည်းစမ်းကြလိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသင်ရှိသည်. ဤသည်အီတလီနိုင်ငံထိပ်တန်းပီဇာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုခဲ့. သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောစားသောက်ဆိုင်, အရသာနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲ! သို့သျောလညျး, ဤအသာအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်. သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အများအပြားရှာတှေ့နိုငျ နောက်ထပ်နေရာများ အရသာရှိတဲ့ပီဇာတွေနဲ့ အီတလီပတ်ပတ်လည် သင်ကိုယ်တိုင်. သင်သည်မည်သည့်အကူအညီဆုံးဖြတ်ခြင်းလိုအပ်လျှင်ဖြစ်သည့်လမ်း နယ်လှည့်အဘို့အကောင်းဆုံး အီတလီနိုင်ငံမှ, မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.saveatrain.com. ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်ကူညီဖို့ထက်ပိုပါလိမ့်မည်! သင့်ရဲ့ရထားထုပ်ပိုး Pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များခရီးသွားလာ, ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါ, နှင့်စွန့်စားမှုစတင်ပါစေ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို(www.saveatrain.com) ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-8-pizzas-italy/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml သင်တို့အား / TR သို့မဟုတ် / fr နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကား / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#italypizza #ပီဇာ #ပီဇာ အီတလီ travelitaly